विवाह गर्ने पछुताउने र नगर्ने चुकचुकाउने किन ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः मंसिर २३, २०७३ - साप्ताहिक
विवाहपूर्व एक्लो जीवन र स्वतन्त्रताको मज्जा लुट्न पाइने र विवाहपछि घर, समाज अनि जीवनसाथीको डर हुने भएकाले हो कि ?
सुनिल कटुवाल, कलाकार
मानिस असन्तुष्ट प्राणी हो, जे छैन त्यो चाहिन्छ र पाएपछि त्यसको अवमूल्यन गर्छ ।
असिम शाह, निर्माता
फरक–फरक युवतीसँग मस्ती गर्न नपाएर होला ।
मानिस असन्तोषी हुन्छ । विवाह गरेपछि स्वर्ग नै पुगिन्छ भनेर विवाह गर्छ अनि पछुताउँछ । विवाह नगर्नेहरूचाहिँ विवाहपछि श्रीमान्ले नयाँ–नयाँ ठाउँ घुमाउला, राम्रा र महँगा सारी ल्याइदेला भन्ने अपेक्षाका कारण चुकचुकाउने होला ।
प्राश्ना पाण्डे, गायिका
आत्मबलको कमी ।
यो विवाह भन्ने कुरै यस्तै हो, ‘शादीका लड्डु, जो खाए पछताए, जो नखाए ओ भी पछताए’ भने जस्तै ।
देवकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक
म त पछुताएको छैन, तर विवाह नगर्नेहरू चुकचुकाउने कारणचाहिँ विवाह गरेको भए धुर्मुस–सुन्तलीको जस्तो जोडी हुन्थ्यो कि भनेर होला ।
विवाह गर्ने सबै पछुताउँछन् भन्ने होइन, तर कोही–कोहीचाहिँ पछुताउँछन्, किनभने उनीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी महत्वाकांक्षा बोकेका हुन्छन्, जसको परिपूर्ति नभएको खण्डमा पछुतो मान्छन् । अविवाहितहरूचाहिँ शारीरिक तथा मानसिक सन्तुष्टिजस्ता वैवाहिक सुख नपाएकाले चुकचुकाइरहेका हुन्छन् ।
ओम प्रतीक, लेखक रनिर्देशक
खै, थाहा भएन । बरु मचाहिँ अहिलेसम्म चुकचुकाइरहेको छु ।
शिशिर राणा, कलाकाररनिर्देशक
विवाहअघि छिन–छिनमै प्यार र विवाहपछि दिन–दिनै वार हुने भएकाले ।
प्रभात लामा, आरजेरभिजे
यो एउटा यस्तो संविधान हो, जुन संविधानभित्र रहेर जिउने हो भने पछुताउनु पर्दैन । मचाहिँ अविवाहित भएर पनि चुकचुकाइरहेको छैन । अब पछुताउने कुराको चाहिँ अनुभव भएपछि भनुँला ।
मदन गोपाल, गायक
खै, आफूलाई पछुताउने अवसर पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । चुकचुकाएको भने छैन, तर पछुताउने बाटोचाहिँ छिट्टै रोज्दैछु ।
जान्वी बोहोरा, नायिका
विवाह गरेकाहरूले तीता–मीठा अनुभव सँगाल्छन्, तर तीतो अनुभव हावी हुँदा पछुताउँछन् । अविवाहितहरूचाहिँ अर्काको जोडी देख्छन् र मुख मिठ्याउँदै चुकचुकाउँछन् ।
रेश्मा सुनुवार, गायिका
जीवनको वास्तविकता नबुझ्नेहरू पछुताउँछन्, समयमै विवाह नगर्नेहरू चुकचुकाउँछन् ।
कृष्णदेव रूपाखेती, म्युजिक भिडियो निर्देशक
अचेलचाहिँ सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि होला । विवाह हुनेहरूको लाइफस्टाइल देखेर विवाह नहुनेहरू चुकचुकाउँछन् । विवाह हुनेहरूचाहिँ विवाह नहुनेहरूको स्वतन्त्रता
देखेर पछुताउँछन् ।
मरिष्का पोखरेल, नायिका
मैले विवाह गरिसकेँ, तर पछुताएकी छैन । विवाह नगर्नेहरूचाहिँ वैवाहिक सुखभोगको आशमा चुकचुकाउँछन् होला ।
भूमि रिमाल, ब्युटिसियन
अविवाहित मानिस विवाहपछि कसैको काँधमा शिर राखेर आफ्ना राम्रा–नराम्रा अनुभव सेयर गर्ने चाहना राख्छन्, त्यसैले चुकचुकाउँछन् । केही विवाहितहरू भने विवाहपछि झेल्नुपर्ने अवास्तविक घटनाहरूका कारण पछुताउँछन् ।
अर्जु खरेल, मोडल
आफू त अविवाहित छु, तर चुकचुकाएको छैन भने पछुताउने कार्य गर्न पनि भ्याएको छैन ।
विनोद न्यौपाने, मोडल
न म विवाहित परेँ, न त विवाह गर्न नपाएकोमा चुकचुकाएको छु । त्यसैले मसँग यो प्रश्नको जवाफ छैन ।
विवाह आइफोनजस्तो भएकाले होला । नयाँ भर्सन बजारमा आएपछि पुरानो फोन हुनेहरू पछुताएझैं हो यो कुरा । लिँदै नलिएकाहरू पनि लिन पाए हुन्थ्यो भनेर चुकचुकाउँछन् ।
पाउनेलाई सस्तो, नपाउनेलाई कस्तो–कस्तो भएकाले ।
गोपाल ढकाल, छन्दे